फिल्म ‘शोले’ का गब्बर सिंह जो मरेर पनि अमर छन् - फ्रन्टलाईन नेपाल
फिल्म ‘शोले’ का गब्बर सिंह जो मरेर पनि अमर छन्
३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १५:५७ September 20, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
काठमाडौं । कुनै जमानाको सुपरहिट फिल्म ‘शोले’ अहिले हेर्दा पनि त्यति नै मजा आउँछ । १५ अगस्त १९७५ मा प्रदर्शन भएको फिल्म शोलेको स्टारकास्ट लुक फेरिएको छ । यस फिल्ममा काम गर्ने कति कलाकार त अहिले यो धर्तीबाट बिदा भइसके । फिल्मका केही यस्ता कलाकारहरु छन् जो मरेर पनि दर्शकमाझ जीवितै छन् ।
अमजद खान (गब्बर सिंह)
जब जब कुनै गाउँमा बच्चा सुत्दैनथ्यो तब उसकी आमाले बच्चालाई सुत नत्र गब्बर सिंह आउँछ भन्ने उनको संवाद अहिले पनि बोलिन्छ । उही गब्बर सिंह आज हामी माझ छैनन् तर उनले गरेको अभिनय भने हामी कहिले बिर्सन सक्दैनौ । अमजद खान २७ जुलाई १९९२ मा बितेका हुन् । जब उनले शोलेमा गब्बर सिंहको भूमिका गरे त्यसपछि त उनी यति हिट भएकी उनलाई नचिन्ने र उनको फिल्म नहेर्ने कोही भएनन् । बन्दुकको पेटी जीउमा झुण्डाएर तम्वाकु खाने उनको अनौठो अन्दाज र एकदमै डरलाग्दो किसिमले हाँस्ने, सवाल जवाफ गर्ने गब्बरको अदा सबैले मन पराउँथे ।
संजीव कुमार (ठाकुर)
फिल्म ‘शोले’ मा कलाकार संजीव कुमारले ठाकुर बलदेव सिंहको भूमिका गरेका छन् । उनले गरेको ठाकुरको भूमिकालाई आज पनि कसैले बिर्सन सक्दैनन् । ६ नोभेम्वर १९८५ मा ४७ वर्षको उमेरको हुँदा उनको मृत्यु भएको थियो ।
ए. के. हंगल (रहीम चाचा)
बलिउडमा सबैले चिन्ने कलाकार हुन ए.के. हंगल । हंगलले फिल्म ‘शोले’ मा रहिम चाचाको भूमिका गरेका छन् । सानो भूमिका भए पनि एकदमै राम्रो भूमिका उनले गरेका थिए । यो भूमिका गरेपछि उनलाई फिल्ममा अफरहरु एकदमै आउन थालेका थिए । २६ अगस्त २०१२ मा उनको मृत्यु भएको थियो ।
कलाकार मैकमोहनले धेरै फिल्महरुमा अभिनय गरेका छन् तर जुन लोकप्रियता उनले शोलेबाट कमाए त्यो अरु फिल्मबाट कमै कमाए होलान । अहिले पनि दर्शकहरु उनलाई फिल्म शोले कै भूमिकाबाट सम्झने गर्छन । फिल्ममा उनले गब्बर सिंहको साथी ‘सांभा’ को भूमिका गरेका थिए । सानो भूमिका भएपनि सबैले सम्झने खाले भूमिका थियो । उनले बोलेको ‘पुरे पचास हजार’ भन्न्े एउटा संवाद अहिले पनि दर्शकको दिमागमा नै छ । १० मई २०१० मा ४७ वर्षको उमेर हुँदा उनको मृत्यु भएको थियो ।
सत्येन कपुर (रामलाल)
‘शोले’ मा ठाकुर बलदेव सिंहको हेरचाह गर्ने रामलालको भूमिकामा थिए सत्यन कपुर । उनले एउटा मालिकको कसरी हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने फिल्ममा रहेको भूमिका एकदमै जोरदार ढंगले गरेका थिए । २७ अक्टुवर २००७ मा उनको मृत्यु भएको थियो ।
लीला मिश्रा (मौसी)
अभिनेत्री लीला मिश्रा दर्शक माझ नभएपनि उनले फिल्म ‘शोले’ मा गरेको अभिनय अहिले हाम्रो मन मस्तिकमा ताजै छ । फिल्ममा मौसीले बोलेको संवादलाई एकदमै रुचाइएको थियो । धेरै फिल्महरुमा उनले आमा, दादि आन्टि जस्ता धेरै भुमिकाहरु गरिसकेकी छिन् । १७ जनवरी १९८८ मा उनको मृत्यु भएको थियो ।
Tagged gabbar singh
कोरोना भाईरसको कारण फिफा क्लब विश्वकप स्थगित
६ चैत्र २०७६, बिहीबार १५:१५ March 19, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल
युरोपियन फुटबल क्लबहरुको ठूलो प्रतियोगिताहरुमा पर्ने फिफा क्लब विश्वकप स्थगित भएको छ । चीनमा आयोजना हुने सन् २०२१ को प्रतियोगिता स्थगित भएको हो । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको कारण प्रतियोगिता स्थगित गरिएको फिफाले जनाएको छ । क्लब विश्वकप जुन १७ देखि जुलाई ४ सम्मका लागि तय भएको थियो । फिफाले कोरोनाको प्रकोपको अवस्था […]
Featured 02 विश्व विश्व समाचार सूचना तथा प्रविधि
६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १४:१४ February 18, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाडौं – गुगल क्रोम वेब ब्राउजरमा डाटा असुरक्षित रहेको तथ्य फेला परेको छ । हालसालै गुगलले आफ्नो वेब स्टोरबाट ५ सय खतरनाक एक्सटेन्शनलाई हटाएको छ । यी क्रोम एक्सटेन्शनहरुले अट्याकरहरुका लागि ब्राउजर डाटा चोरी गर्ने टूलको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । यी एक्सटेन्शन्स माल्भटाइजिग र एड फ्रड कम्पनीको हिस्सा थिए । गुगल क्रोमको वेब […]
नयाँ फिल्मका लागि ३५ करोड पारिश्रमिक लिए शाहिदले
मेसीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन अर्जेन्टिनाले आग्रह गर्ने